Imihlahlandlela Yezenhlalo Yezamabhizinisi
NgoMsombuluko, Juni 7, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sekuyinyanga edlule ngifunda Bandakanya: Umhlahlandlela ophelele weMikhiqizo namabhizinisi wokwakha, wokuhlakulela, kanye nokukala impumelelo kwiWebhu eNtsha.
Lokhu akukhona ukufunda okulula - a ephelele Umhlahlandlela kungaba yinto engaphansi! Yincwadi oyidingayo ukuhlala phansi, ugxile kuyo futhi ugaye ikhasi elilodwa ngasikhathi. UBrian uzenze owedlula le ncwadi - inabile futhi ingahlanganisa zonke izici zokufaka uphawu lokufaka uphawu, iwebhu kanye nemithombo yezokuxhumana kuze kube manje.
Njengoba kunemininingwane eminingi, kunzima ukubhala okuthunyelwe okukodwa mayelana nayo yonke le ncwadi. Ngenxa yalokhu, ngithanda ukwabelana ngokuhlanganiswa kukaBrian kwefayela le- imithetho yokubandakanya ibhizinisi kanye nemithombo yezokuxhumana evela eSahlukweni 17 (kugcizelelwa yimina):
Qinisekisa a kuyavumelana, kuyabukeka, futhi kuthuthukiswa ngomkhiqizo ithoni yezwi.
Faka inani ekuzibandakanyeni ngakunye - fakela isandla esihlahleni nasefeni.
Hlonipha labo ohlanganyela nabo futhi hlonipha inkundla lapho ubamba iqhaza khona.
Qinisekisa ukuthi wena amalungelo okuhlonipha amalungelo futhi usebenzise futhi ukhuthaze ukusetshenziswa okulungile kokuqukethwe okusebenzayo.
Vikela okuyimfihlo nokuphathelene ulwazi.
Yiba sobala futhi ube ngumuntu (kahle, kholwa futhi usize).
Melela lokho wena kufanele amele.
Yazi futhi usebenze ngaphakathi kwe- imingcele echaziwe.
Yazi ukuthi uzisonga nini futhi ungazibandakanyi nama-troll noma uwele kuwo izingibe zokuxoxa.
Gcina izinto okuxoxa njengoba kusebenza ekuboniseni nasekuqiniseni ubuntu nenani lomkhiqizo wakho nomkhiqizo owumelelayo.
Hlala kumlayezo, ephuzwini, naku-track ngezinhloso zendima yakho kanye nayo umthelela ebhizinisini lomhlaba wangempela lapho unikela khona.
Ungadoti umncintiswano - hhayi ngqo, noma kanjani.
Ixolisa lapho kunesidingo.
Phendula ngezenzo zakho futhi awunikeli izaba.
Yazi ukuthi ukhuluma nobani futhi abakufunayo.
Veza ubudlelwano, izethulo, ukusebenzisana nezinhloso.
Practice ukuzithiba; ezinye izinto azikufanele ukwabelana ngazo.
Le mihlahlandlela ayibandakanyi nje kuphela imithetho yokuzibandakanya online, ngifisa ukuthi leyo kube yimithetho ebusayo yanoma yikuphi ukuxhumana nabasebenzi abavela kunoma iyiphi inkampani. UBrian uqhubeka ephakamisa ukuthi wonke umfundi abeke phansi le ncwadi futhi asungule eyabo imihlahlandlela. Njengoba sengisebenzele izinkampani ezimbalwa, ngixwayise ngokungaphuli imithetho efana nale. Enye inkampani engiyaziyo ithanda ukusebenzisa wonke amathuba ukufaka udoti (lokho abakholelwa ukuthi) umncintiswano… futhi isikhathi ngasinye ngikholwa ukuthi bayaziphoxa.
Le ncwadi inolwazi oluningi futhi kufanele ifundwe okuyimpoqo kuyo yonke inkampani engena ngemithombo yezindaba emisha. Ngisho noma ungayifundi incwadi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, ukwakheka kwencwadi, isigaba sezethenjwa esinemininingwane, kanye nenkomba ebhalwe kahle kuyenza ibe incwadi efanelekayo yezinkomba kunoma iyiphi ideskithophu yomthengisi.
Tags: uzimiselethola amavidiyo abucayiuhlelo lokusebenza le-iphonemdgmdgokubeamasayithi aphendulayoscott adams
Jun 28, 2010 ku-12: 10 PM
Njengomxhumanisi we-IT ngazi kahle ukuthi abaphathi be-IT balwa nokuthi izinkundla zokuxhumana zikhiqiza noma ziyaphazamisa yini izinkampani nabasebenzi bazo. Isoftware iyakhiwa futhi inqubomgomo nemikhawulo kunqunywa nsuku zonke ngabaphathi be-IT. Ukuphepha kwamanethiwekhi ezinkampani kusengcupheni kepha amandla okusungula asebenzise imithombo yezokuxhumana ayisanqante enkulu ngokwanele engxoxweni yokuthi isetshenziswa kanjani kahle leyo ndlela iyaqhubeka. Amanethiwekhi wePalo Alto aqhamuka nephepha elimhlophe, http://bit.ly/d2NZRp, ezocubungula izingqinamba ezungeze izinkundla zokuxhumana emsebenzini. Kubalulekile ukuthi ungaqondi izinzuzo ezisheshayo zokwenza ibhizinisi ukuthi umuntu uphila kanjani, kepha usongo oluletha i-ROI enkulu yenkampani nokukhiqiza uma kukhulunywa ngokuphepha nokuvikeleka kweseva.